LEGO လုပ်ပါ Marvel mechs သည်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသောဟာသစီးရီးတစ်ခုတွင်တွဲနေသလား။
12 / 08 / 2021 13 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 253 Views စာ0မှတ်ချက် 76140 သံက Man Mech, 76168 ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက် Mech လက်နက်, 76169 Thor Mech သံချပ်ကာ, 76198 Spider-Man & ဆရာဝန် Octopus Mech တိုက်ပွဲ, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, ရုပ်ပြ, Lego, Lego မှ marvel, Marvel, Marvel ရုပ်ပြ, Mech, တွစ်တာ
အဆိုပါ Lego Group သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် stop-motion animation အသစ်တစ်ခုကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် Marvel mech အစုံ၊ လက်နက်စုံစုဆောင်းမှုသည်အဘယ်အရာကိုချည်နှောင်နိုင်သည်ကိုလှောင်ပြောင်သည်။
Lego Marvel ၇၆၁၆၈ Captain America Mech Armor ကို ၇၂၆၈၈ သရုပ်ပြဗွီဒီယိုဖြင့်ပြသခဲ့ပြီးလူမှုမီဒီယာမီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်၊ သို့သော်ဤ Tweet သည်မျက်လုံးချင်းတူသည်
စူပါဗီလိန်များ၊ ကပ္ပတိန်အမေရိကနှင့်သူ၏အစွမ်းထက်သောဒိုင်းများသည်သူတို့ mech အရွယ်အစားသို့ရောက်သောအခါပိုမိုအားကောင်းလာသည်။ #လီဂိုMarvel #MechStrike pic.twitter.com/dZKlz5P3u4
- Lego (@LEGO_Group) သြဂုတ်လ 12, 2021
၂၀၂၀ တွင်စတင်ခဲ့သောအတွဲငယ်များတွင်စူပါဟီးရိုးဇာတ်ကောင်များအတွက်စက်ရုပ်များပါ ၀ င်သည်။ စာရင်းတွင်ပါဝင်သည် 76140 သံက Man Mech၊၇၆၁၆၉ Thor Mech Armor နှင့်နောက်ဆုံးပေါ် - 76198 Spider-Man & ဆရာဝန် Octopus Mech တိုက်ပွဲ.
ဘီလျံနာ Tony Stark သည်သူ၏အိမ်ကြီး၌ချထားသောလက်နက်အချို့ရှိကောင်းရှိနိုင်သော်လည်း Thunder Asgardian God of brick သည်တည်ဆောက်ထားသော mech များနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိပုံမပေါ်ပေ။ ဟိ Marvel အစုံသည်သီးသန့် (သို့) နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသော minifigures များနှင့်မော်ဒယ်များကိုဖမ်းရန်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသောနည်းလမ်းကိုပေးရုံသာမကအသုံးပြုသော hashtags တစ်ခုအရသိရသည်။ Lego Group's Tweet, ဤစက်မှုတည်ဆောက်ပုံများသည် Avengers Mech Strike စီးရီးသစ်များနှင့်အမှန်တကယ်ဆက်စပ်နိုင်သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်စတင်ခဲ့သော Avengers Mech Strike ဟူသောနာမည်ဖြင့်သိသာထင်ရှားသည့်အတိုင်းအသင်း၏သူရဲကောင်းများသည်ပုံစံကျသောချပ်ဝတ်တန်ဆာများနှင့်အနည်းငယ်ကွဲပြားသည်ကိုသိသာသည်။ Lego အဖွဲ့လိုက်ဒီဇိုင်းများ ဤအတွဲများစုစည်းမှုသည်စီးရီးနှင့်သွယ်ဝိုက်။ အထူးသဖြင့်ရုပ်ပြများတွင်ပါ ၀ င်သော minifigures အများစုကိုဒီဇိုင်းထုတ်ထားပုံရသည်။
အဆိုပါ Lego Group သည်၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များကိုမကြာသေးမီကနှင့်တစ်ထပ်တည်းတူရန်မထူးဆန်းပါ Marvel အသစ်ကဲ့သို့ဖြန့်ချိသည် 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper What If ... ၌ဇာတ်ကောင်၏ပွဲ ဦး ထွက်မလာမီတစ်ပတ်ကျော်အလိုတွင်စတင်ခဲ့သည်။ အပေါ် Disney+.
← အသစ် LEGO Ideas puzzle-themed ပြိုင်ပွဲ၏ fan vote ကိုယခုဖွင့်လိုက်သည်
နောက်ထပ် LEGO ဖန်တီးသူအသစ်စက်စက်နှစ် ဦး နှင့် CITY အစုံကိုအွန်လိုင်းမှာဖော်ပြတယ် →